Nagu saabsan - ALinks
Macluumaadka wanaagsan wuxuu ka dhigi karaa khibradaada mid raaxo leh oo mararka qaar ka fogaanaya inaad gasho dhibaato daran.
Xiriirka Dibedda waa degel ku saabsan nolosha caalamiga ah iyo u safridda qof walba. Waxaa la aasaasay bishii Juun 2019 koox iskaa wax u qabso ah oo caalami ah oo la shaqeeya muhaajiriinta iyo qaxootiga.
Xiriirrada dibedda waxay doonayaan inay siiyaan macluumaad la isku halleyn karo oo cad oo ku saabsan ku noolaashaha dibadda tirada ugu badan ee dadka adduunka ku nool. Waxaan rabnaa inaan la wadaagno waaya aragnimada dalxiisayaasha, safrayaasha, ardayda caalamiga ah, qurbaha, soogalootiga, qaxootiga, iyo qof kasta oo raba inuu ogaado ku noolaashaha dibedda ama sida waddankooda loogu soo dhoweeyo shisheeyaha.
Xiriirinta Dibadda waxaa la sameeyay oo ay taageerayaan Asylum Links.
Asylum Links waa midnimo caalami ah oo soogalootiga iyo qaxootiga ka diiwaan gashan Boqortooyada Midowday, Urur Iskaashato Tabaruc ah oo Ingiriiska iyo Wales oo leh Lambarka sadaqada 1181234.
Ku noqo bogga ugu weyn